Wholesale PET Soda Makani Mugadziri uye Mutengesi | Copak
PET soda magaba, inogona kuve mazita sePET magaba, PET pop-yepamusoro magaba uye zvichingodaro. PET Inogona ndeye yakasarudzika mubatanidzwa wePET Jar ine Nyore kuvhura simbi muvharo.Ivo zvakagadzirwa nePET zvinhu uye zvakafanira kune mapakeji ezvinwiwa zvakadai sezvinwiwa, michero, smoothies, maminy, teal, iced kofi, milkshakes zvichingodaro. Zvimwe zveCOPAK'sPET soda magaba sezasi,
PET soda magaba, Inogona kuve mazita sePET magaba, PET pop-yepamusoro magaba uye zvichingodaro. PET Can ndeye yakasarudzika mubatanidzwa wePET Jar uye Nyore kuvhura simbi muvharo.Izvo zvakagadzirwa nePET zvinhu uye zvakakoshesa mapakeji ezvinwiwa zvakadai sezvinwiwa, michero, smoothies, minyu, teal, iced kofi, milkshakes zvichingodaro. Zvimwe zveCOPAK’s PET soda magaba sezviri pazasi
- Chinyorwa: Yakakwira mhando yepurasitiki PET, inogona kuve 100% yakadzokororwazve.
Kudya giredhi chengetedzo: Kubva pane zvinhu zvekutsvaga kune kugadzirwa uye kutumira. Maitiro ese apedzwa mune chiyero chekudya.
Yakareba yakasimba uye inotsemuka isingagadzike: PET soda magaba akakwana kubvisa chikafu chako. Izvo zvakagadzirirwa kubata ruoko uye zvakavharwa. Iwe haufanire kunetseka nezvekudonha kana kutsemuka.
- Kapu: Shandisa Aluminium zvinhu, zip-yepamusoro inogona. Yakavhurika uye yakachena.
-Good maonero ane pfungwa, vatengi vanogona kuona izvo zvirimo zvakananga, vachiratidza giredhi uye kukosha kwezvigadzirwa zvako
Chipinganidzo Chakanaka kubva kuOxygen, Carbon dioxide Unhu.
Shanghai COPAK Indasitiri kambani inyanzvi yekugadzira PET mapakeji emhando dzakasiyana. PET makapu, PET mabhodhoro uye PET soda magaba ndizvo zvedu zvigadzirwa zvikuru.PET soda magaba zvinosiyana maumbirwo, mavhoriyamu, saizi nekudhinda. Iwe unogona kutaurira ako anodikanwa ruzivo, ako aunoda PET mapakeji anenge ari muruoko rwako.
Mavhoriyamu acho anotangira pa6oz kusvika pa24oz. 12OZPET soda magaba uye 16 OZ PET soda magaba ndiyo inonyanya kufarirwa.
Yakasarudzika: 4C yekudhinda chinamirwa kana epurasitiki shrink firimu kuputira kana UV-screen kudhinda pane bhodhoro inotsigirwa logo kudhinda.
Iyo chivharo nemabhodhoro ari kusimbisa nekuisa chisimbiso muchina. Iyo chivharo chiri nyore kuvhurika nekuidhonza iyo pop-yepamusoro mhete.
Semi-otomatiki kana 100% otomatiki soda anogona kuvhara michina inopihwa. Tine hukama hwakanaka nekuisa chisimbiso fekitori yemuchina uye tinogona kuwana mutengo wemakwikwi wewe.You anogona kutumira chisimbiso muchina uye iyoPET soda magaba pamwechete mumudziyo mumwe.
Pashure: PET pop-yepamusoro inogona
Zvadaro: Plastiki soda inogona
Tsika soda makani
Eco Shamwari mabhodhoro epurasitiki